Waxyaabaha aan caadiga ahayn: Codka Madal Macaamiil | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 12, 2013 Khamiis, May 7, 2015 Douglas Karr
Voice of Customer (VoC) waa aragti guud oo ku saabsan baahida macaamiisha, rabitaanada, fikradaha, iyo dookhyada lagu kasbaday su'aalaha tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn. Halka web dhaqameed Analytics wuxuu noo sheegayaa waxa booqdehu ku sameynayo bartaada, falanqaynta VoC waxay ka jawaabaysaa MAXAY macaamiisha u qaadaan ficilada ay ku sameeyaan internetka.
Waxyaabaha aan caadiga ahayn waa madal cilmi baaris firfircoon oo ka faa'iideysata tikniyoolajiyada meelo badan oo taabasho ah, oo ay ku jiraan desktop, mobile iyo kiniin. IPercepts waxay ka caawisaa shirkadaha inay qaabeeyaan, ururiyaan, dhexgalaan oo ay falanqeeyaan xogtooda VoC.
Waxyaabaha aan caadiga ahayn waxay kudartaa xogta VoC webka Analytics xogta sida Google Analytics, oo kuu oggolaaneysa inaad:
Lasoco heerarka qanacsanaanta kooxaha booqdayaasha gaarka ah oo sifiican u qiimeeya bogagga degitaanka, bogagga bixitaanka, ereyada muhiimka ah ee raadinta, ilaha taraafikada iyo ololeyaasha.
Cabir heerarka beddelka Isbarbar dhig heerarka qanacsanaanta waqtiga goobta, bogagga la booqday, qaybaha la booqday iyo juqraafi ahaan.
Ku baar waqtiga goobta adoo ku dhammeeya hawsha si loo kala sooco booqdayaasha u halgamaya helitaanka macluumaadka iyo kuwa sida wanaagsan ugu hawlan barta. Hesho qoraal furan, fikradaha qoraalka dhabta ah iyo jawaab celinta isticmaaleyaasha ku xiran falanqaynta habdhaqanka.
Waxyaabaha aan caadiga ahayn waxay taageertaa 32 luqadood oo waa la gaari karaa astaantaada.
Tags: jawaab celinta macaamiishasahanka macaamiisha-celinkhayaalikaararka ra'yigafikradahavoccodka macmiilka